Ciidanka Danab oo hawlgal gaar ah ku dilay Sarkaal Shabaab ka tirsanaa | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ciidanka Danab oo hawlgal gaar ah ku dilay Sarkaal Shabaab ka tirsanaa
Ciidanka Danab oo hawlgal gaar ah ku dilay Sarkaal Shabaab ka tirsanaa
Kadib howlgal qorsheysan oo ay ciidanka sida gaarka ah utababaran kumaandooska soomaaliya ay ka fuliyeen degmada Sablaale ee gobolka shabeelada hoose ayay ku dileen sarkaalkii Al-shabaab uqaabilsanaa Jubbooyinka iyo toban dagaalme oo la socday.
Ciidanka kumaandooska ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen guri ku yaala degmada Sablaale, islamarkaana halkaasi ku toogtay sarkaalka iyo ilaaladiisa.
Sarkaalka ay dileen ciidanka ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay (Mucaad dheere) kaasi oo Al-shabaab uqaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan wilaayaadka Jubbooyinka ama gobolada Jubbooyinka, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan kumaandooska Somalia.
“Ciidanka kumaandooska oo ka war hayay in habeenimadii Sabtida sarkaalka iyo xubnaha lasocday soo gaareen Sablaale ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmadaasi iyagoona ugu galay gurigii ay ka joogeen Sablaale islamarkaana goobti kuwada toogteen sarkaalka iyo tobankii xubnood ee la socday, ayaa lagu yii qoraal ka soo baxay ciidamada DANAB.
Kumaandooska Somalia ayaa kordhiyay howlgalada qorsheeysan ee lagu beegsanaayo Saraakiisha iyo dagaalamayaasha ka tirsan Al-shabaab.
Previous articleMadaxweynihii Hirshabelle oo is casilay
Next articleGolaha Wasiirada oo meel ka baxsan Villa Somaliya shir uga socdo